Banyere Anyị - Anping County Jintai Metal Product Co., Ltd.
The ígwè grating ngwaahịa awa site Anping County Jintai Metal Product Co., Ltd. na-enwe edo spacing, kpomkwem nha, ezigbo na-ebupụta na elu ike ịgbado ọkụ na àgwà a kwadoro site anyị ahịa.The ngwaahịa bụ: Flat ígwè grating (nke a na-akpọkwa ígwè Smooth steel). grating) na serrated nchara grating (nke a na-akpọkwa nha nha nha nha), grating nchara mechiri emechi na oghere nchara mepere emepe, ntinye igwe na-ekpo ọkụ galvanized nchara na grating ígwè anaghị agwọ ya, steepụ steepụ na mkpuchi trenchi (nke a na-akpọkwa mkpuchi mmiri), Ihe nchara nchara, igwe anaghị agba nchara. grating, Aluminom ígwè grating, Pịa ekpochi ígwè grating, Ngwakọta ígwè grating, Pụrụ iche ígwè grating, m mmanya nchara grating, arọ ọrụ ígwè grating na ìhè ọrụ nchara grating, FRP grating (Fiber glass grating).
Na mgbakwunye na nchara grating mmepụta, Anping County Jintai Metal Product Co., Ltd nwekwara ike na-enye ndị ọzọ waya ntupu ngwaahịa, dị ka ngere, Welded waya ntupu, Welded ntupu panel, Re mmanya welded ntupu, Galvanized ígwè waya na Black annealed ígwè. waya.Niile waya ntupu ngwaahịa nwere ezigbo mma na kacha mma price.
A na-eji ngwaahịa nke Anping County Jintai Metal Product Co., Ltd. na ụlọ ọrụ, ọrụ ugbo, ihe ọkụkụ, ihe owuwu, njem na mining. Anyị na-ebupụ ngwaahịa anyị na USA, Australia, Canada, Poland, Middle East, Africa, Czech Republic. , Italy, Thailand, Singapore na France.
Ngwaahịa Jintai Metal agafeela Asambodo Sistemu Ogo Ogo International ISO9001.Ngwaahịa anyị niile na-agbaso ụkpụrụ ịdị mma mba ụwa ma nwee ekele dị ukwuu n'ahịa ahịa dị iche iche n'ụwa niile.
Anyị nwere a zuru okè ahịa otu na isi àgwà nke ndị na-ahụ maka ahịa nwere ike inye ezi mgbe-sales service.Plenty nke ahụmahụ na elu àgwà niile dị maka gị!Anyị ji obi ụtọ na-atụ anya ịmalite mmekọrịta azụmahịa na ndị enyi zuru ụwa ọnụ. Anyị na-anapụta ihe anyị kwere nkwa!Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na anyị, anyị nwere ike inyere gị aka inweta ihe ị chọrọ!Na-atụ anya ajụjụ gị, imekọ ihe ọnụ nwere ike inyere anyị aka inweta ọnọdụ mmeri-mmeri.